अर्थ/बजार – Page2– Vision Khabar
मंगलबार सल्यान कपुरकोटमा किसानले कुन मुल्यमा तरकारि विक्रि गरे ?
Visionkhabar ७ श्रावण २०७६, मंगलवार २०:००
सल्यान । मंगलबार सल्यान कपुरकोटमा लागेको तरकारि बजारमा किसानहरुले आफुले उत्पादन गरेको ताजा तरकारि तथा फलफुल विक्रि गरेका छन् । विभिन्न ठाउँबाट आएका ब्यापारिहरुलाइ किसानहरुले तरकारि विक्रि गरेका हुन्...
Visionkhabar ४ श्रावण २०७६, शनिबार २१:०२
जाजरकोट । घरेलु साना उद्योग विकास समिति, शाखा कार्यालय, जाजरकोटले यो वर्ष ३४ लाख ११ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्यालयले रु ३४ लाख...
Visionkhabar १३ असार २०७६, शुक्रबार २१:२२
जाजरकोट । ‘बैंक खातामा छोरी, सुरक्षा जीवनभरि’ कार्यक्रमअन्तर्गत जुनीचाँदे गाउँपालिकाले अब छाेरी जन्मिनेबित्तिकै १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम दिने भएको छ। साउन १ गते देखि लागु हुने गरि गाउँपालिका भित्र...
घरेलु कार्यालय जाजरकाेट द्धारा सिप बिकास तालिम सम्पन्न
Visionkhabar ११ असार २०७६, बुधबार ००:०५
जाजरकाेट,। घरेलु तथा साना उद्याेग बिकास समिति शाखा कार्यालय जाजरकाेटले बिभिन्न तालिम समापन गरेकाे छ । म‌गलवार भेरी नगरपालिकामा एक कार्यत्रःमकाे अायाेजना गरी कार्यालयले भेरी नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएका तालिमहरु...
छेडागाड नगरपालिकाद्वारा ५० करोड बजेट प्रस्ताबित
Visionkhabar १० असार २०७६, मंगलवार २२:०९
जाजरकोट । छेडागाड नगरपालिकाको नगर सभा सुरु भएको छ। छेडागाड नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७का लागि ५० करोड बजेट प्रस्ताब गरेको छ । मंगलबार देखि सुरु भएको छेडागाड नगरपालिकाको छैठाैँ...
शिबालय गाउँपालिकाद्वारा २८ करोड बजेट प्रस्ताबित
Visionkhabar १० असार २०७६, मंगलवार २१:०९
जाजरकाेट । शिवालय गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि २८ करोड बजेट पस्ताबित गरको छ । गाउँपालिकाकाले आज पाँचौं गाउसभामाबाट आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ लागि २८ करोड ६३ लाख ९९ हजार...
काेहलपुर नगरपालिकाद्वारा ८० करोड बजेट बिनियोजित
Visionkhabar १० असार २०७६, मंगलवार २१:०८
कोहलपुर । कोहलपुर नगरपालिकाको नगर सभा सुरु भएको छ।कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७का लागि ८० करोड बजेट बिनियोजित गरेको छ । मंगलबारदेखि सुरु भएको कोहलपुर नगरपालिकाको पाँचौे नगरसभामा आर्थिक...
नलगाडमा मह प्रशोधन केन्द्र खोलिदैं
Visionkhabar १० असार २०७६, मंगलवार ११:४६
जाजरकोट । जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको सहयोगमा मह प्रशोधन केन्द्र खोलिने भएको छ । यसका लागि नगरपालिकाको वडा नं. २ छेप्कामा सरकारको २५ लाख लागतमा ७ कोठे...
४४ करोड ५९ लाखको बजेट सार्बजनिक गर्दै भेरी नगरपालिका
Visionkhabar १० असार २०७६, मंगलवार १०:५८
जाजरकोट । भेरी नगरपालिकाले यो बर्ष ४४ करोड ५९ लाखको बजेट सर्बजनिक गर्न लागेको छ । आर्थिक बर्स ०७६/०७७ को लागी आज हुन लागेको पाँचौ नगरसभा बाट यो बजेट...
४८ अर्ब आम्दानी पु‍र्‍याउँदै टेलिकम
Visionkhabar ९ असार २०७६, सोमबार १९:०१
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ अर्बको हाराहारीमा आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आव २०७६/७७ बजेटमार्फत विभिन्न नयाँ कार्यक्रममार्फत आम्दानीलाई वृद्धि...